Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Ethernet | Shiinaha Ethernet Switch Factory
8 Port 1000Mbps Ethernet ilaa 2 Fiber Switch Model ZJ-1000228-S20
8 Port 1000Mbps Ethernet ilaa 2 Fiber Switch waa 1000BASE-FX Ethernet copper warbaahinta ilaa 1000Base-TX Fiber. Bixi xal fudud oo dhaqaale si kor loogu qaado shabakad naxaas ku dhisan oo loo yaqaan 'fiber optic' si loo kordhiyo gaadhista calaamadda. Fogaanta gudbinta Fibreerka illaa 120KM. Naqshad-ku-dheel-dheel dheel, si fudud loo rakibo. Waxaa loo isticmaali karaa inuu kaligiis istaago. Astaamaha • 8 Port 100 / 1000M Ethernet + 2 Port Fiber Switch, SC • Kala-badh ama wada-xaajoodka wada-xaajoodka isku-dhafka ah ee buuxa • Wada-xaajoodka tooska ah ee 100 / 1000Mbps ee dekedda naaska • Auto MD ...
8 Port 1000Mbps Ethernet ilaa 1 Fiber Switch Model ZJ-1000208-S20
8 Port 1000Mbps Ethernet to Fiber Switch waa 1000BASE-FX Ethernet copper warbaahinta ilaa 1000Base-TX Fiber. Bixi xal fudud oo dhaqaale si kor loogu qaado shabakad naxaas ku dhisan oo loo yaqaan 'fiber optic' si loo kordhiyo gaadhista calaamadda. Fogaanta gudbinta Fibreerka illaa 120KM. Naqshad-ku-dheel-dheel dheel, si fudud loo rakibo. Waxaa loo isticmaali karaa inuu kaligiis istaago. Astaamaha • 8 Port 100 / 1000M Ethernet + 1 Port Fiber Switch, SC • Kala-badh ama wada-xaajood wada-xaajood buuxa ah • 100 / 1000Mbps wada-xaajood otomaatig ah oo loogu talagalay dekedda naxaasta • Auto MDI / M ...
2 Port 1000Mbps Ethernet si Fiber Switch ZJ-1000204-S20
2 Port 1000Mbps Ethernet to Fiber Switch waa 1000BASE-FX Ethernet copper warbaahinta ilaa 1000Base-TX Fiber. Bixi xal fudud oo dhaqaale si kor loogu qaado shabakad naxaas ku dhisan oo loo yaqaan 'fiber optic' si loo kordhiyo gaadhista calaamadda. Fogaanta gudbinta Fibreerka illaa 120KM. Naqshad-ku-dheel-dheel dheel, si fudud loo rakibo. Waxaa loo isticmaali karaa inuu kaligiis istaago. Astaamaha • 4 Port 100 / 1000M Ethernet + 2 Port Fiber Switch, SC • Kala-badh ama wada-xaajoodka wada-xaajoodka buuxa • Wada-xaajoodka tooska ah ee 100 / 1000Mbps ee dekedda naaska • Auto MDI / M ...
2 Dekeddaha 100 / 1000Mbps Ethernet Fiber Switch Model ZJ-1000102-25
2 Ports 100 / 1000Mbps Ethernet Fiber Switch waa 1000BASE-FX Ethernet naxaas warbaahinta 1000Base-TX Fiber. Bixi xal fudud oo dhaqaale si kor loogu qaado shabakad naxaas ku dhisan oo loo yaqaan 'fiber optic' si loo kordhiyo gaadhista calaamadda. Fogaanta gudbinta Fibreerka illaa 120KM. Naqshad-ku-dheel-dheel dheel, si fudud loo rakibo. Waxaa loo isticmaali karaa inuu kaligiis istaago. Astaamaha • 2 Port 100 / 1000M Ethernet + 1 Beddelka Fibirka Dekedda, Habka Keliya Faybaarka Labaad • Kala-badh ama wada-xaajood wada-xaajood oo buuxa ah • Wada-xaajood toos ah oo 100/1000 Mbps ah ...
Sharaxaadda Badeecadda Beddelka PoE wuxuu bixiyaa awood iyo xog hal dhibic ah, iyadoo la adeegsanayo Power over Ethernet (PoE) hal fiilo Cat-5 ah. Waxaa loo isticmaali karaa xiriir kasta oo 10 / 100Mbps ah iyo keenista awoodda heerka warshadaha IEEE 802.3af. Istaraatiijiga istiraatiijiga ah ee istiraatiijiga ah wuxuu siinayaa awood 802.3af qalab dhammaad ah, Intaa waxaa dheer, beddelka PoE wuxuu si toos ah u go'aamiyaa shuruudaha PoE, xawaaraha, duplex, iyo nooca fiilada iyadoo la adeegsanayo Auto Uplink. Si fudud loo shaqeyn karo oo lagu kalsoonaan karo Beddelka PoE wuxuu ku habboon yahay awood u siinta qalabka PoE sida ...
10/100 / 1000M Gooniis PoE Splitter Cable 4812GB
Magaca Waxsoosaarka Farsamaynta Farsamada 10/100 / 1000M PoE Splitter Cable Model Model 4812GB Power Supply Type 1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-) korontada soosaarka Poe danab Soo-gal 44-57V DC Voltage Soosaarka 12V DC Soosaarka Hadda 1.25A (MAX) Isku xira 1x RJ45 dekedda wax soo saarka 1x RJ45 wax soo saarka dekedda 1x DC dekedda wax soo saarka Network Dhexdhexaad Cat5 ( UTP) ama in kabadan borotokool IEEE 802.3 i 10 Salka-T IEEE 802.3 u 100 BASE-TX IEEE 802.3 x Xakamaynta socodka IEEE 802.3 af Awoodda Ethernet Heerka 10/100 / 1000M ...
10 / 100M Go'doon PoE Splitter Cable 4812G
Magaca Waxsoosaarka Farsamada Magaca 10 / 100M PoE Splitter Cable Model 4812G Power Supply Type 1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-) Qalabka korantada PoE Voltage Input 44- 57V DC Soosaarida Danab 12V DC Soosaarka Hadda 1.25A (MAX) Isku xira 1x RJ45 dekedda wax soo saarka 1x RJ45 dekedda wax soo saarka 1x DC dekedda wax soo saarka Shabakad Dhexdhexaad Cat5 (UTP) ama Borotokool ka badan IEEE 802.3 i 10 BASE-T IEEE 802.3 iyo 100 SALDHIGA-TX IEEE 802.3 x Xakamaynta socodka IEEE 802.3 af Awoodda Ethernet Rate 10 / 100M LED Status P ...
24 Port 10/100 / 1000M POE Switch- (24 + 4) 2422GB (Taageerada 1U hayaanka caadiga ah)
Beddelka PoE wuxuu bixiyaa awood iyo xog hal dhibic ah, iyadoo la adeegsanayo Power over Ethernet (PoE) hal fiilo Cat-5 ah. Waxaa loo isticmaali karaa xiriir kasta oo 10/100 / 1000Mbps ah iyo keenista tamarta heerka IEEE 802.3af. Istaraatiijiga istiraatiijiga ah ee istiraatiijiga ah wuxuu siinayaa awood 802.3af qalab dhammaad ah, Intaa waxaa dheer, beddelka PoE wuxuu si toos ah u go'aamiyaa shuruudaha PoE, xawaaraha, duplex, iyo nooca fiilada iyadoo la adeegsanayo Auto Uplink. Si fudud loo shaqeyn karo oo lagu kalsoonaan karo Beddelka PoE wuxuu ku habboon yahay awood u siinta qalabka PoE sida kamaradaha IP-ga ...
24 Port GIGABIT FULE POE Switch- (24 + 2) 2420GB (Nooca Desktop)
Beddelka PoE wuxuu bixiyaa awood iyo xog hal dhibic ah, iyadoo la adeegsanayo Power over Ethernet (PoE) hal fiilo Cat-5 ah. Waxaa loo isticmaali karaa xiriir kasta oo 10 / 100Mbps ah iyo keenista awoodda heerka warshadaha IEEE 802.3af. Istaraatiijiga istiraatiijiga ah ee istiraatiijiga ah wuxuu siinayaa awood 802.3af qalab dhammaad ah, Intaa waxaa dheer, beddelka PoE wuxuu si toos ah u go'aamiyaa shuruudaha PoE, xawaaraha, duplex, iyo nooca fiilada iyadoo la adeegsanayo Auto Uplink. Si fudud loo shaqeyn karo oo lagu kalsoonaan karo Beddelka PoE wuxuu ku habboon yahay awood u siinta qalabka PoE sida kamaradaha IP-ga, WLA ...
16 Port GIGABIT Active POE Switch- (16 + 3) 1621GB (Taageerada 1U hayaanka caadiga ah)
12 Dakadda 10 / 100M Beddelka Poe Firfircoon - (10 + 2) 1012B